Ukuphupha ngobunzima Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Incwadana inxulunyaniswa ngokuzenzekelayo nesikolo, umsebenzi wasekhaya kunye nomsebenzi waseklasini. Ihlala iqukethe inani elincinci lamaphepha agcinwe kunye ngeqweqwe.
Esikolweni, iincwadana ezinemigca zisetyenziselwa izifundo apho ubhala kakhulu. Amaphepha e-Checkered ahlala eluncedo kwizifundo zesayensi nakwimfundo yezibalo. Iincwadana ezingenanto ngaphandle kwemigca encedisayo zinokuyilwa ngokukhululekileyo kwaye zisetyenziswe, umzekelo kwizifundo zobugcisa. Iincwadana zamanqaku okanye iincwadana zokubhala zihlala zisetyenziswa ekhaya: njengencwadi yekhaya, njengesikhumbuzo, okanye njengamanqaku ngokubanzi Iimagazini kunye neehlaya zikwangamaphephancwadi ngokubonisa. Zingabizi kakhulu kuneencwadi kwaye zixabisiwe ngexabiso labo lokuzonwabisa.
Igama elithi isiphatho linentsingiselo yesibini eyahlukileyo ngokupheleleyo: linokuthetha ukuphatha isiphatho okanye isabile. Abo "banezintso ezandleni zabo" bakweyona ndawo inamandla. Lawula imeko kwaye usebenzise amandla.
Ukuba uphupha incwadana, unokuba nomdla wokuyibona ukuba ithini. Okanye mhlawumbi bhala into ngokwakho. Ukutolikwa kwephupha lesimboli "yencwadana", iphupha elo kufuneka liqwalasele ezona ziganeko zisondeleyo zephupha kunye nemeko yobuqu.
1 Uphawu lwephupha «incwadana yokubhalela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «incwadana yokubhalela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «incwadi yokubhalela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «incwadana yokubhalela» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba uphawu lokuphupha "ukuphatha" sisixhobo sesikhali, oku kubonisa ukutolikwa kwephupha. Ukuzithemba yokuphupha. Wakwazi ukuthatha inyathelo lokuqala. Ngoku unganika into ngokufanelekileyo.
Njengencwadana yokubhalela, le ncwadana inika ithuba lokuthatha amanqaku. Mhlawumbi umphuphi ubhale apho izinto ngosiba, awayefuna ukuzigcina azifihle kwabanye. Ke ngoku ixesha liphelele ngaphakathi ndiyalibala izixhobo. Ephupheni, ezi ziganeko zityhalela emva ngophawu lwephupha ukuya kwimemori yephupha. Ukutolikwa kwamaphupha, incwadana yokubhalela ngamanye amaxesha inokuba sisimemo sokuhlawula ngakumbi umntu othile.
Ukuba incwadana isetyenziswa ephupheni uku-odola nokulungelelanisa ubomi bemihla ngemihla, ikwamele ukutolikwa kwamaphupha. ngokucokisekileyo kwaye ulumke. Njengamahlaya, uphawu lwephupha lubandakanya uburharha kunye nokukhululeka kobomi. Ukuphupha kufuneka kubekhona nefayile yakho iindawo ezimnandi ukuqonda.
Kwinkcazo edumileyo yamaphupha, iphupha lencwadana yokubhalela livakalisa isicelo sokubhalela umntu ileta.
Uphawu lwephupha «incwadana yokubhalela» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lamaphupha, uphawu "lwebrowser" yephupha limele oko kwinqanaba leengqondo. Gcina yamava kunye nokuqwalaselwa. Iimbono kunye nokubonakala kubhalwe phantsi ukuze ukwazi ukuzikhumbula kamva.
Ukuba incwadi yamanqaku ephupheni yincwadi yokubhalela okanye incwadi yokubhalela, kuya kufuneka ukhumbuze iphupha ukuba kufuneka ubhale into ebalulekileyo ngaphambi kokuba ulibale. Ukuba utitshala owaziyo ujonga ephupheni, okanye umntu ongutitshala ongaqondakaliyo ngemvume yephupha kwincwadi yakhe yokubhala, impembelelo yokungazi ichazwa kuyo, ukutyhila intoeyayifihliwe ngaphambili.
Njengesiphatho semela okanye esinye isixhobo, incwadana ifanekisela ukutolikwa kwamaphupha. isigqibo ukusuka ekuphupheni ukunyanzelisa yena kunye nemibono yakhe. Unamandla ezandleni zakhe kwaye unokusebenzisa le meko kuye. Ephupheni, ufumana inkxaso kwi-subconscious yakho yezenzo zakho kubomi bokwenyani.
Uphawu lwephupha «incwadi yokubhalela» - ukutolika kokomoya
Ukuba ubhala kwincwadana yamaphupha ephupheni, oku kubonisa ukutolikwa kwephupha ukuba awazi nto. inkqubela ngokomoya ibhalisiwe. Isimboli yephupha ithatha indlela yokuphupha, eyinyathela kwinqanaba lokomoya, phambi kwamehlo ayo.